Cheshire Cat dia slot manana 5 reels miaraka amin'ny 40 paylines. Ny tantara malaza Alice in Hafakely no foto-kevitry ny slot. Ny fanamboarana ny slot dia ala sy feonkira dia mampitony iray. Ny sary dia mahafinaritra fotsiny ary maro tombony teo ihany ny lafin-javatra mahavariana ity mahagaga ho traikefa nahafinaritra ny lalao mahaliana kokoa. Ity lalao ity Azo mpilalao Casino finday slots.
Dimy tsotra Paylines ity finday tsotra Casino slots
Ny slot manana ireo hilokana isan-karazany izay Miovaova arakaraka ny 40p niakatra ho any £ 400 isan-kofehy ireny. Ny marika miseho eo amin'ny reels dia ahitana Alice, ny March Hare, ny sompanga ary ny Cheshire Cat koa nitsinjaka miaraka amin'ny karatra- J, K, A sy Q, mofomamy slices, ary mahagaga potions.
Ny slot manome 12.5 fotoana ny tsato-kazo raha-tanety 5 marika eo amin'ny iray payline. Ny Super stacked endri-javatra dia endri-javatra izay ny mpilalao no tena handray soa be dia be. Ao amin'io endri-javatra, famantarana iray ho tsapaka voafidy mba hivadika ho iray faran'izay stacked kofehy ireny mariky ny teny rehetra.
Misy tombony endri-javatra atao hoe Free Spins Bonus Feature izay niteraka vokany rehefa kodiarana telo, fara fahakeliny tombony-tanety fanehoana an'ohatra tao amin'ny reels. 3 amin'izy ireo dia mari-pankasitrahana anao maimaim-poana dimy spins, 4 amin'izy ireo dia mari-pankasitrahana anao maimaim-poana folo spins ary koa folo heny ny tsatòka tanteraka. Ianao raha mba miova avy ho tsara vintana ampy hahazoana 5 azy, dia ho nahazo maimaim-poana roa-polo spins miaraka amin'ny vola loka danja 50 fotoana ny loka tanteraka.
Talohan'ny io endri-javatra io no hanombohany, misy kodia endri-javatra izay nitsinjaka teo anatrehan'i am-piandohan'ny spins maimaim-poana izay mari-pankasitrahana eo amin'ny tampon-tanety izay voafidy reels tsapaka. Azonao atao ihany koa ny mahazo 4 bibidia reels izay afaka miala avy ho tena mandoa.
Misy endri-javatra Guarantee Bonus izay miantoka ny fandresena fara fahakeliny, tokony 10 fotoana ny tsato-kazo. Raha tsy mandresy, ny fandresena dia hatao nihoatra ny. Ny fanalahidin'ny fandresena lehibe dia ny hitandrina ny maso ny ny fivoaky ny reels ao amin'ny Free Spins Bonus Feature.
Amin'ny hampifandrafy manomboka amin'ny ambany ny mpanelanelana amin'ny tontolo, ny slot azo nilalao lalao manerana ny fitaovana rehetra avy amin'ny finday, biraonao takelaka sy ny fitaovana. tsara, ny Casino finday slots koa izany lalao. Ny tsara tarehy tsotra sariitatra nanaovana miasa tsara ho an'ny mpilalao raha tsara ihany koa ny lalana Alaina milalao eo aoriana. Namely ny reels ny slot amin'izao fotoana izao mihitsy tamin'ny Casino finday slots na fitaovana hafa misy sy ny Cheshire Cat mety mitondra amim-pifaliana tsy ampoizina ho anao.